N'ELUIGWE NA ỤWA, DUKE NUKEM GA-AGBA IHE NKIRI NA JOHN CENA NA-EDU NDú - AKỤKỌ - 2019
A na-akwadebe otu ngosipụta nke otu n'ime ndị na-agba chaa chaa mara mma nke njedebe nke narị afọ gara aga, Duke Nukem, maka mmepe. Ndị na-ede akwụkwọ na-ekwe nkwa ịṅụrị ọṅụ na-atọ ọchị ma na-arụ ọrụ dị omimi na ụdị "Ụgha".
Ụlọ ọrụ ahụ ka na-arụ ọrụ n'oge na-eme atụmatụ, ma ọ bụrịrị eziokwu na asịrị. Ya mere, mbipụta dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-egosi na ndị nnọchianya nke ụlọ ọrụ Gearbox, bụ ndị a maara maka onye edemede nke mbụ Counter Strike na nlọghachi nke usoro Duke Nukem na 2011 n'okpuru codameame Forever, ga-amalite na mmepe. Jean-Julien Baronne, onye na-arụ ọrụ maka mmegharị nke egwuregwu kọmputa, ga-ewere oche nke Jean-Julien Baronne, nke na-arụ ọrụ na ya: site na mkpịsị akwụkwọ ya weere onyinyo ahụ bụ "Nkwenye nke ndị Assassin" n'Agha Ụwa nke Assasin na 2016.
Nkọwa nke Duke Nukem nke mbụ na-akọ akụkọ banyere nwanne nna nna ya dị ọcha, Duke Nyukema, na-alụso ndị mbịarambịa nke jupụtara na obodo America. Mgbe ya na ndị ọbịa a na-akpọghị ya kwatuo, onye isi a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ndị nwere nleta nleta na ọdụ ụgbọ elu. Ihe niile a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ihe ọchị. Dị ka akwụkwọ ndị si mba ọzọ si kwuo, ọrụ bụ isi e ji eme ihe nkiri na-abịanụ bụ ihe a na-ewere na John Cena na-agba mgba.
Tabloid kwenyesiri ike na ọ bụ onye na-agba chaa chaa John Cena ga-arụ ọrụ kachasị
Mgbanwe nke Duke Nukem ga-emejupụta ọtụtụ ọrụ a na-agba na mbara igwe kọmputa. Na mbụ, ihe nkiri dị otú ahụ dị ka Warcraft, Okwukwe nke Assassin, Resident Evil, Mkpa maka Speed ​​na ọtụtụ ndị ọzọ pụta. Duke na-echere oge ya. Kedu ihe egwuregwu ndị ọzọ nke egwuregwu kọmputa ị ga-achọ ịhụ n'ụdị nnukwu ihe nkiri? Kwụsị ihe ị ga-ekwu na ịtụle ihe ndị ị na-atụ anya site na akụkọ na-abịa.